Unreal Injini Ongororo: Pros, Cons, uye Kukodzera - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Mobile Applications, Mobile Apps, nhare mbozha kusimudzira, newgenapps, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Unreal Injini Ongororo: Pros, Cons, uye Kukodzera
Injini yemutambo yakagadzirwa neEpic Mitambo injini iyo nhasi inozivikanwa seIyo Unreal Injini. Yakatanga kuratidzwa muna 1998 yekutanga-munhu shooter mutambo Unreal. Kunyangwe yaigadzirirwa zvakanyanya kune vekutanga-vanhu kupfura, yanga ichishandiswa nemazvo mukusiyana kwemamwe marudzi, kusanganisira kubira, kurwa mitambo, maMMORPG, uye mamwe maRPG. Iwo macode akanyorwa muC ++, iyo Unreal Injini ine huwandu hwakawanda hwekutakurika uye inoshandiswa zvakare nemitambo yakawanda Developers nhasi. Unreal Injini yakagamuchira mibairo yakati wandei uye yakatohwina mubairo weGuinness World Records ye “injini yemavhidhiyo yakabudirira kwazvo mugore ra2014. Saka ngatitsvakei muiyo Unreal Injini Yekuongorora pasina yakawanda ado.
Chii chinonzi Unreal Injini?
Unreal Injini 4 iboka rakazara re kuvandudzwa kwemitambo zvishandiso zvinoitwa kune chero munhu anoshanda neiyo chaiyo-nguva tekinoroji. Kutanga kubva Enterprise kunyorera uye zviitiko zvemu cinematic kumitambo yepamusoro-soro paPC, koni, nhare, Virtual uye Augmented Reality, Unreal Injini 4 inokupa iwe icho chinhu chose chaunoda kuti utange, kutumira, kukura uye kumira kubva pahuremu.
Yepasi-kirasi maturusi eseturu uye nyore kusvika kune yekufashukira inobvumira Developers kukurumidza kukwirisa pamazano uye kuona mhedzisiro ipapo pasina kubatika pamutsetse wekodhi, nepo yakazara yakazara kodhi kodhi kurudyi kwekupinda kunopa munhu wese muiyo Unreal Injini 4 nzanga rusununguko rwekugadzirisa uye kuwedzera mainjini maficha.
Ikozvino kuburitswa kwemutambo uyu ndeye Unreal Injini 4 iyo yakagadzirirwa Microsoft Windows, macOS, Linux, SteamOS, HTML5, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Magic Leap One, uye rakapotsa chokwadi (SteamVR/HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR, Google Daydream, OSVR uye Samsung Gear VR.
Mune runyorwa rwemibairo Unreal Injini yakakunda sere Game Game Magazine Front Line Mubairo weYakanakisa Game Injini (2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012]), inzvimbo muFront Line Awards Horo yeMukurumbira, uye matanhatu ekuvandudza Maindasitiri Akanaka Mitezo yeYakanakisa Injini (2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017). Yakawanawo MitamboRadar's E3 2012 Yakakosha Zvikwereti zve "Zvakanakisa Zvidavado zveNotevera-Gen", IGN Yakanakisa yeE3 2012 ye "Coolest Tech", Game Informer Yakanakisa yeE3 2012 Mipiro ye "Best Tech", uye yakanzi "Best Injini. ”MuKuvandudza 100: Iyo Tech Runyorwa 2014.
Unreal Injini yakatokufadza here? Wobva watora nyowani sosi pane Game kuvandudza pano chaipo.
Nhare Yemitambo Kukura eBook
Zvakanakira Unreal Injini
Unreal Injini ine zvirinani hunhu hwemhando dzakasiyana dzemifananidzo. Zviri nani pane mimwe mitambo chaizvo. Nekudaro injini iyi inozivikanwa nekugadzirwa kweepamusoro-soro Triple-A mutambo mune iro basa rekutanga rinotambwa nekubudirira kwekirasi yepamusoro.
Kune zvirongwa zvakaita semabhuroko muinjini isingaiti kuitira kuti kunyangwe maartist vasina ruzivo rwakakosha vagone kushandisa injini muvhu rezvirongwa. Zvakare, iri basa rakakodzera prototyping. Asi iro basa hombe richazofanira kushandisa C ++ zvakafanana.
Kune akasiyana mamiriro ezvinhu, Unreal Injini ine akawanda maturusi uye mashandiro, ayo asipo mune mimwe mitambo ine yakafanana mhando. Iyo Unreal Injini ine vanoona vapepeti uyezve mimwe mitambo.
Nekuda kwemabasa akasiyana ekupa tekinoroji inoshanda uye nekukurumidza kupfuura mimwe mitambo. Iyi injini yemitambo inomhanya chaizvo.
Zvekugadzirisa kwemutambo, ichi ndicho chishandiso chakanakisa.
Iyo Unreal Injini inoratidzirwa neanoonekwa ekugadzirisa, kuburikidza neapo iwe unogona kubata yekuwedzera maitiro uye huwandu hwenguva yakashandiswa pairi.
Kana uine timu yehunyanzvi vanhu saka iyi injini injini yakakunakira iwe.
Kuita shanduko mumutambo zviri nyore, iwe unongofanirwa kuve neruzivo nezve C ++.
Cons of Unreal Injini
Zvekushanda kweiyo Unreal Injini, iwe unoda kopi ine rezinesi yekushanda uye kunyange kutobhadhara mishanu muzana mutero mushure mekunge mutambo wako uchave unobatsira.
Zvekugadzira mitambo yakapusa, injini isiriyo haina kukodzera. Kunyangwe yemabasa epfupi-pfupi, iyo injini isiriyo haigone kushandiswa. Kune iwo mapurojekiti ane hupenyu hwakareba, injini isiriyo yakanakira ivo asi mutengo webasa rakadai unenge uri mukuru kune kumwe kunobva.
Kune mumwe munhu, uyu mutambo hauna kukodzera.
Nekuchenjera sarudza timu iri yekubata panofanirwa kuve neyakafanira sarudzo maitiro ekuchengetedza zvese zvakakosha mupfungwa uye nyanzvi muUnireal Injini zvakaderera.
Uyewo Verenga: Iyo Master Tungamira kune Game Kubudirira
UNREAL ENGINE 3 (UE3)
UE3 ndiyo yaitungamira injini yaive iriko muchizvarwa chakapfuura. Kune mapurojekiti matsva, UE4 inotsigirwa.
UNREAL KUSIMBISA KIT (UDK)
Iyo yemahara edition ye Unreal Injini 3 ndeye Unreal Development Kit. Zvino, ino sisitimu haitsigire UDK uye inokurudzira kutanga mitsva mitsva yemahara nekushandisa UE4, iyo inokupa iwe zvese zvazvino injini maficha pamwe izere nekodhi yekodhi yekuwana.
Unreal Injini 4.19 inowanikwa. Kunyangwe iwe uchida kugadzira mitambo, mitsara midhiya, dhizaini ekuona kana zvigadzirwa zvigadzirwa, Unreal Injini 4.19 inokutendera iwe kuti upinde mukati mehunyanzvi maitiro uye uzive chaizvo izvo icho chakazara chigadzirwa chinoita senge nhanho dzese dzenzira. Pane zvimwe zvinhu zvitsva zviripo zvekupa, kuvheneka, cinematic uye Augmented reality kufambiswa kwebasa etc.
Izvo zvinodiwa sisitimu yekuvandudza neUE4, zvinonzi desktop kana PC ine Windows 7 64-bit kana Mac ine Mac OS X 10.9.2 kana gare gare, 8 GB RAM uye quad-core Intel kana AMD processor, uye DX11 inoshamwaridzika vhidhiyo kadhi. UE4 inomhanya pamatafura uye malaptop pazasi pemazano aya, asi mharidzo inogona kudzivirirwa.
Zvigadzirwa zvinogona kuburitswa neUnreal Injini 4
Chero chigadzirwa chinobvumidzwa nemutemo, nekuregererwa kwekubhejera kunyorera uye mamwe maitiro ekuchengetedza-akakosha ekudzivirira anotsanangurwa muEULA anogona kuburitswa. Kunyangwe mitambo, mademo, Zvirongwa zveVR, ekuratidzira ekuratidzira, mataera, mafirimu, uye nezvimwe zvinogona kuburitswa.
Izvo chete zvikamu zveiyo Unreal Injini iwe yausingakwanise kuburitsa kune veruzhinji ndeyeyeyekutanga kodhi uye maturusi kana shanduko kwavari; idzi nzira dzinogona kungoparadzirwa kune vamwe marezinesi nekodzero yekupinda kune imwechete vhezheni yeiyo Unreal Injini.
UnrealScript (inowanzo kupfupikiswa kuUScript) mutauro wekunyora weUnreal Injini uyo unoitwa mukushandisa kunyora kodhi yemutambo uye mutambo wemitambo. zviitiko isati yasunungurwa yeUnreal Engine 4. Kuti zvive nyore uye zvepamusoro-purogiramu yemutambo mutauro wakagadzirwa. Muturikiri weUnrealScript akarongwa naTim Sweeney, akaitawo mutauro wekare wekunyora mutambo, ZZT-oop.
Kungofanana neJava, Unreal script inotungamirwa nechinhu isina yakawanda nhaka (makirasi ese anowana nhaka kubva kune yakajairwa Chinhu chinhu), uye makirasi akajeka mune mamwe mafaera akapihwa kirasi yavanotsanangudza. Kusiyana neJava, Unreal script haina zvigadzirwa zvekuputira zvemhando yepamberi. Interfaces inongotsigirwa muUnreal Injini chizvarwa 3 uye mashoma Unreal Injini 2 mitambo. Unreal script inotsigira opareta kuwandisa, asi nzira yekuwandisa haina kutsigirwa, kunze kwekuda kwekusarudza parameter.
Nezve Sweeney uyu, achitaura naGamasutra pa mutambo Developers Musangano (GDC) mu2012, Epic yakazivisa kuti Unreal script yakanga ichibvisirwa Unreal Injini 4 ichida C ++. Chinyorwa chekuona chaizosimbiswa neBlueprints Visual Scripting system, chinotsiva iyo yekutanga Kismet visual script script.
Imwe yenguva huru mukusimudzira Unreal Injini 4 yaive, takave nematanho akateedzana nezve UnrealScript - mutauro wekunyora wandakavaka watakatakura kuburikidza nezvizvarwa zvitatu. Uye izvo zvataifanira kuita kuti zvikwikwidze mune ramangwana. Uye isu takaramba tichipfuura nepakakura uye hombe maficha ezve izvo zvataifanira kuita kuti tisimudzire, uye ndiani aigona kuita basa racho, uye rakanga richinyatsoita, risinganzwiki. Uye kwaive nemusangano mukuru uyu kuyedza nekuzvigadzirisa, uye kuyedza kucheka zvinhu uye kusarudza zvekuchengetedza, uye kuronga uye… paive nepano pandakatarisa ipapo ndikati 'unoziva, zvese zvauri kuronga kuwedzera kune UnrealScript yatove muC ++. Nei isu tisingori kungouraya UnrealScript uye toenda kune yakachena C ++? Iwe unoziva, kunonyanyisa kuita uye kwakanyanya kusagadzikana. Zvinotipa zvese izvi zvakanaka.
Uyewo Verenga: Matipi Ekubudirira Game Kubudirira
Unreal Injini EULA (End Ekushandisa License Chibvumirano)
Iyo Unreal Injini 4 EULA iri chaizvo gwaro repamutemo iro iwe raunobvumirana naro paunosaina Unreal Injini. Iyo inodzora mashandisiro ako eiyo Unreal Injini uye zvakare inotsanangura ako kodzero uye zvisungo kana iwe ukavaka mitambo kana zvimwe zvigadzirwa uchishandisa injini. Kune iyo ruzivo, iwe unogona kudhawunirodha iyo EULA kubva iyo iripo mune yePDF fomati. Iyo yepamutemo vhezheni yeEULA iripo muChirungu chete, asi parizvino vhezheni irimo mumutauro wechiJapan zvakare. Kunyangwe EULA iripo mumutauro weKorea uye EULA irimo mumutauro wechiChinese futi.
Unoda mutambo wakagadziridzwa pane Unreal Injini? Wobva wasvika kwatiri kuti ubvunze